कागती निचोर्दै छन् आफ्नै घर ज’लाउनेहरु नै तताउँदै गरेको दुधमा खरानीको आशमा : बाँस्कोटा – Sudarshan Khabar
कागती निचोर्दै छन् आफ्नै घर ज’लाउनेहरु नै तताउँदै गरेको दुधमा खरानीको आशमा : बाँस्कोटा
काठमाडौ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद मा विवादास्पद अडियो बाहिरिएपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले गत फागुन ८ गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । उनी अहिले निवर्तमान मन्त्री हुन् । अहिले उनी खुलेर नै सामाजिक सञ्जाल अपडेट गर्न थालेका छन् । बाँस्कोटाले आफ्नोबारे प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको भन्दै ट्वीट गरेका थिए। त्यस यता कमै बोल्दने गरेका बाँस्कोटा लकडाउनका समयमा भने सामाजिक सञ्जालमा मज्जैले जम्न थालेको देखिन्छन। । तताऊदै गरेकाे दुधमा कागति निचाेर्न २४सै धन्टा तानाबाना बुन्ने र भएभरका सम्यन्त्र परिचालन गरेर कृतिम कुहिरिमन्डल मार्फत शक्तिआर्जन गर्ने सिध्दान्त नेकपामा स्विकृत हाेला त? भन्छन नि, घरमा आ’गाे ल’गाएपछि खरानिकाे दुःख हुदैन।
अडियो प्रकरणसँगै राजीनामा दिएका निबर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा डेढ महिनादेखि ‘गुमनाम’ जस्तै थिए । सञ्चारमाध्यमबाट टाढा रहेका उनी सामाजिक सञ्जाल भने यत्तिखेर सक्रिय छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत २५ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । लकडाउनका बेला बास्कोटाले फेसबुकको सदुपयोग गरिरहेका छन्। भलै त्यहाँ जतिसुकै गालीको वर्षा होस्। उनको पोष्टमा गरिएका गालीका शब्दहरू आँखा खोलेर पढ्न सकिने खालका छैनन् तर पनि बाँस्कोटाको पोष्ट भने रोकिएका छैनन् बरू व्यंग्यात्मक शैलीमा उनीहरूलाई नै तीर हानिरहेका छन् उनी । संयोग के छ भने उनको भाषामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै शैली देखिन्छ। उस्तै उखान टुक्का र उस्ताउस्तै व्यंग्यवाणहरू । सत्यलाई लखेटने र लखेटीने क्रम चल्दै गर्दा महामा”रीपछि अपनाउनुपर्ने बाटोबारे ध्यान पनि दिने कि?
यो उनको एकघण्टा अघिको स्टाटस । यो स्टाटस उनीहरूले मात्र बुझछन् जसले सत्तारुढ नेकपाभित्रको राजनीतिक परिदृश्य बुझेका छन्।उनको यो तीर पूर्व माओवादीका नेतृत्व र पूर्व एमालेका विपरित गुटका नेताहरूतर्फ सोझिएको छ । कोरोना रोकथामका लागि चीनबाट ल्याइएको सामग्रीमा भ्रष्ट्राचार भएको समाचार बाहिरिनुलाई सत्तारुढ दलको एउटा खेमाले अर्को खेमाको प्रपन्च ठानिरहेको छ । बाँस्कोटाले तिनै खेमालाई टार्गेट गरेर यो तीर फ्याँकेका हुन् । बाँस्कोटाले शुक्रबार सात प्याराग्राफको एउटा लेख पोष्ट गरेका छन् जसमा उनले ८ ओटा प्रश्न गरेका छन् । लेखमा उनले जीवन जगतका कुरा गरेका छन्। कोरोना भाइरसले मानव जीवनमा पार्ने असरदेखि विकास निर्माणमा पार्ने प्रभावसमेतका कुराहरू उनले उल्लेख गरेका छन्। ‘नेपालमा गाउँलाई सहरले निल्दै गएको छ । अहिले कोरोनाले सामाजिक दुरी कायम गर्न हामीलाई बाध्य पारेको छ । यो महामारीपछि हाम्रो सामाजिक मुल्य र जीवनपद्धतिको मौलिकतालाई जोगाउन हामीले गर्नसक्ने काम केही हुनसक्छ कि सक्तैन ?’ उनले प्रश्न गरेका छन् । यावत चिन्तनका बीचपनि उनले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न भने यो स्टाटसमा पनि छुटाएनन्।पदमा हुंदा चुप नहुदा शेर बनेर छेपारे चरित्र देखाउनु भन्दा जिबनभर आफ्नै स्वभावमा रमाउनु मज्जा लाग्छ ,मलाई त।फेरि तं चुप लाग भन्लान कसै-कसैले केहि छैन परेकाे सहुंला ।बांकि यहांहरुकै मर्जि।
‘सत्यलाई लखेटने र लखेटिने क्रम चल्दै आएको छ । चल्दै पनि जाला । आफु नां गिएर अरुलाई नं ग्याउने दाउपेच चल्दै गर्दा हामीले महामारीपछि अपनाउनुपर्ने बाटोबारे सोच्न, सुझाव दिन पनि ध्यान दिए राम्रै होला कि ?’ उनको व्यंग्यात्मक सुझाव छ। यति मात्रै होइन उनले थपेका छन्, ‘मैले यसो भन्दा प्रिअकुपाइड माइन्डसेट भएका र डीप फेकको सि कार बनेकाहरुले के भन्छन् भन्ने पनि मलाई थाहा छ । तर अध्यारोको राज सुर्य नझुल्किन्जेललाई मात्र हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेपछि उत्पन्न विवादमाथि उनले टिप्पणी गरे। ‘देशका राष्ट्रपतिले जनताको चासो लिनुपनि नाजायज हो भने जायज कुराको परिभाषा कस्तो हुन्छ होला ?’ उनको यो काउन्टर जिज्ञासामाथि कडा प्रतिक्रिया आउछ भन्ने उनलाई अग्रिम जानकारी छ, त्यसैले त अन्तिममा लेखेका छन्, ‘कतिपय मेरा परममित्रहरूलाई दिनभरको गरम मसला बन्ला ।’देशकाे रास्ट्रपतिले जनताकाे चासाे लिनु पनि नाजायज हाे भने जायज कुराकाे परिभाषा कस्ताे हुन्छ हाेला? हुनत मेराे यहि कुरा नै ‘कतिपय’ मेरा परममित्रहरुलाई दिनभरकाे गरम मसला बन्ला ।तर पनि मनकाे कुरा भनेकाे नि !
राष्ट्रपतिले धार्चुलामा अलपत्र नेपाली, खाडीलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीप्रति एक शब्द पनि खर्च नगरी अमेरिकामा रहेका नेपालीप्रति मात्रै चिन्ता व्यक्त गरेको भन्दै आलोचना भैरहेको छ। एकसाता अघिको यो पोष्टमा पनि उनले ‘प्रि(अक्पाई माईन्डसेट’ शब्द छुटाएका छैनन्। कवितात्मक शैलीमा लेखिएको स्टाटसमा उनले आफूलाई लोकतन्त्रको सिमाना देखाई दिन आग्रह गरेका छन्। विरोधी र विपक्षीलाई शब्दवाण प्रहार गर्न उनी खप्पिस छन्। नपत्याए उनको यो पोष्ट हेरौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको ५ (स) लाई उनले यसरी व्याख्या गरेका छन्। सडक, सदन, सामाजिक सन्जाल, सभा समारोह र सार्वजनिक स्थानबाट कम्युनिष्ट सरकारमाथि हमला।
आफुलाई बर्ग सङ्धर्षकाे र श्रमजीवी वर्गकाे पक्षधर हुं भन्ने साथिहरुले हेक्का राख्नु पर्छ कि कांङरेसले पांच (स)भनेकाे थियाे । – सडक,सदन,सामाजिक सन्जाल,सभा समाराेह र सार्वजनिक स्थान बाट कम्युनिष्ट सरकारमाथि ह’मला गरिने छ ।बै’ष फर्काउने काङ्रेस सिद्दान्त, तिन बर्षपछिकाे तयारि।एक साता अघि पोष्ट गरिएको उनको एउटा स्टाटसमा पनि चोटिलो व्यंग्यवाण भेटिन्छ। उनले आफ्नो विपक्षीलाई शितको आयुसँग तुलना गर्दै भनेका छन्, ‘शितको आयु घाम नलाग्दासम्म मात्र हो ।’ त्यस्तै उनले विश्व समुदायले कोरोना भाइरस नामको हलाहल विष पिउंदै गरेको भन्दै यो संकटको घडीमा निलकण्ठ बन्न आग्रह गरेका छन् ।